सर्वाधिक आकर्षक महिला पुरुष | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← लागूऔषधसहित पक्राउ परे कैदी
प्रमद्वारा सबै दललाई सरकारमा आउन आहृवान →
‘हाइटले साथ दिएको भए उहाँ सम्पूर्ण रूपमा हिरो देखिनुहुन्थ्यो ।’ पारस खड्का पनि उनको नजरमा आकर्षक ठहरिए । पारसको सम्बन्धमा उनको भनाइ थियो- ‘नेपाली क्रिकेटमा स्थापित पारस योङ्ग तथा ह्यान्डसम छन् ।’ विकास राणाको हेयर स्टाइल, सुरजसिंह ठकुरीको लुक्स, निमा रुम्बाको ह्याट चलाउने स्टाइल, भूषण दाहालको बोल्ने शैली उषालाई मनपर्दो रहेछ ।
‘दिया मास्केमा एक प्रकारको अपिल झल्किन्छ,’ आलोकश्रीले भने- ‘उनी ग्लामरस छिन् ।’ उनले आफ्नो रोजाइभित्र आनीछोइङ डोल्मा, करिश्मा मानन्धर, मल्लिका कार्की, संयुक्ता राणा आदिलाई राखे । आलोकले नम्रता श्रेष्ठलाई ‘सुन्दर साथै आफ्नो महत्व बुझ्ने’ भनेर प्रशंसा गरे । उनलाई सदीक्षा श्रेष्ठको ‘आँखा र हाँसो’ मनपर्दो रहेछ । नायक आर्यन सिग्देलले झरना बज्राचार्यलाई नम्बर वानमा राख्दै भने- ‘उनी सम्पूर्ण रूपमा फिट छिन् ।’ त्यस्तै, ऋचा शर्मा राम्रो फिगर भएको र सबै चीजले भरीपूर्ण भएको उनले बताए । ‘सानै उमेरमा सफल’ भन्दै नायक राजेश हमालले करिश्मा कार्कीको प्रशंसा गरे । हमालले मनीषा कोइरालालाई आकर्षक महिलाको पंक्तिमा राख्दै भने- ‘आजीवन आफ्नै ढंगले जिउन चाहने महिला हुन् उनी ।’ उनले रामकुमारी झाँक्रीलाई ‘नारीशक्तिको’ संज्ञा दिए । हमालको नम्बर वानमा भने दिलशोभा श्रेष्ठ परनि् । दिलशोभाबाट प्रभावित भएको बताउँदै हमालले उनी निःश्वार्थ भावनाले समाजसेवामा समर्पित भएको बताए । मोडल बेबी थापाले माधवकुमार नेपाल र कमल थापा आफूलाई आकर्षक लाग्ने बताइन् । त्यस्तै, बाबुराम भट्टराई र रामवरण यादवलाई पनि उनले छुटाउन चाहिनन् । ‘राजनैतिक क्षेत्रमा चर्चित, शारीरकि रूपले स्मार्ट’ भएकाले उनीहरू आफ्नो रोजाइमा परेको बेवीले बताइन् ।
‘अहो ! कति स्मार्ट,’ भूषण दाहालको सम्बन्धमा कृति भट्टराईले भनिन्- ‘बौद्धिक मात्र होइन, आकर्षक पनि हुनुहुन्छ ।’ कोमल वलीले ‘तर्कसंगत र निर्भीक पत्रकारिता गर्ने’ भन्दै दाहालप्रतिको आफ्नो आकर्षण प्रस्ट्याइन् । तेक्वान्दो खेलाडी आयशा शाक्यले भनिन्-‘उहाँको आकर्षक बोली एवं व्यक्तित्व मन पर्छ ।’ सभासद् तथा अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले ‘नजिकका सहकर्मी’ भन्दै पुष्पकमल दाहाल, सुवास नेम्वाङ, बाबुराम भट्टराई, गगन थापा र झलनाथ खनाल आफूलाई आकर्षक लाग्ने बताइन् । सपनाले एकमुस्ट कारण खुलाइन्-
‘उहाँहरू जुन उचाइमा हुनुहुन्छ, आकर्षक व्यक्तित्वले थप साथ दिएको छ ।’ उनले डाक्टर भगवान कोइराला पनि निकै आकर्षक लाग्ने बताइन् । ‘उहाँ उमेरले पाको भए पनि योङ्ग केटीहरूले मन पराउँदो रहेछ,’ डा. कोइरालाको सम्बन्धमा उनले भनिन्-‘उहाँको पर्फर्मेन्सबाट प्रभावित छु ।’ प्रतिमा श्रेष्ठले विजयकुमार पाण्डे आकर्षक लाग्ने बताइन् । उनको रोजाइमा अनुदानजंग राणा, गगन थापा, पुष्पकमल दाहाल, अभि सुवेदी तथा भुवन केसीहरू परे । प्रतिमाले आफूलाई आकर्षक लाग्नुको कारण बताउँदै भनिन्- ‘उहाँहरूको योगदान, बौद्धिक क्षमता एवं व्यक्तित्वका आधारमा आकर्षक लागेको हो ।’
‘आशालाग्दो युवा नेतृत्व,’ गगनप्रति तेक्वान्दो खेलाडी संगीना वैद्यको धारणा यस्तो थियो- ‘उनी जोसिला र प्रभावशाली नेता हुन् ।’ सुवानी मोक्तानले पनि उनको व्यक्तित्व आकर्षक लाग्ने बताइन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको हक्की स्वभाव, प्रभावशाली बोली एवं आकर्षक व्यक्तित्व धेरैको रोजाइमा पर्‍यो । सहभागीहरूले ‘विचारमा निरन्तर प्रतिबद्ध’ नेताका रूपमा थापालाई लिए । डा. बाबुराम भट्टराईको आकर्षण गत वर्षझंै यस वर्ष पनि कायम रह्यो । सपना मल्ल प्रधान, बेबी थापाल आदिले डा. भट्टराईलाई ‘आकर्षक व्यक्तित्वको धनी’ भन्दै प्रशंसा गरे । संगीनाले भनिन्- ‘नेपालको राजनीतिमा उहाँको उपस्थिति जति सशक्त छ, व्यक्तित्व त्योभन्दा कम छैन ।’ समकालीनहरू ‘बूढा’ भैसक्दासमेत आफू भने नायककै भूमिकामा जमिरहेका छन् राजेश हमाल । अझै अविवाहित उनलाई ‘साँच्चैको हिरो’ भनेर प्रशंसा गर्नेहरू थुप्रै छन् । ‘हाइट र बोल्ने शैली मन पर्छ,’ गायिका आस्था बीले भनिन्- ‘उहाँ वास्तवमै हिरोजस्तो हुनुहुन्छ ।’ नायिका नम्रता श्रेष्ठले गत वर्षझैं यस वर्ष पनि वरुण एसजेबी राणालाई आकर्षक दस पुरुषको पहिलो पंक्तिमा राखिन् । त्यसपछि उनले भाष्करराज राजकणिर्कार, गगन थापा, पारस खड्का, प्रशान्त ताम्राकार, भूषण दाहाल, प्रसन स्याङ्देन आफूलाई निकै आकर्षक लाग्ने बताइन् । ‘स्टाइल आइकन’ भन्दै सुवानी मोक्तानले निमा रुम्बालाई आकर्षक पुरुषमा लिइन् । त्यसो त स्टाइलिस निमालाई आकषिर्त पुरुषको कोटामा राख्नेहरूमा उषा खड्गी, नम्रता श्रेष्ठ, संगीना वैद्य आदि पनि छन् । यता कृति भट्टराईले भने सुदिन पोखरेललाई ‘स्टाइल आइकन’ को संज्ञा दिइन् ।
धेरै महिलाको नजरमा सर्वाधिक आकर्षक पुरुष दरिए भूषण दाहाल । उनको नजरमा चाहिँ साहना बज्रचार्य नम्बर वानमा परनि् । त्यसपछि झरना बज्राचार्य, निशा अधिकारी, स्नेहा राणा, शीताष्मा चन्द, जया शाह, ज्योत्सना सिंह, रविना जोशी, मृदुला खनाल तथा प्रमदा शाह उनको रोजाइमा परे । ‘उनीहरू आकर्षक एवं आत्मविश्वासी छन्,’ छनौटपछि उनको संक्षिप्त प्रतिक्रिया थियो । नायक आर्यन सिग्देलले झरना बज्राचार्य आफूलाई सर्वाधिक आकर्षक लाग्ने बताउँदै संक्षिप्तमा भने- ‘ हरेक कोणबाट सुन्दर छिन् ।’ उनले पूजा लामा, सदीक्षा श्रेष्ठ, ऋचा शर्मा आदि पनि आफूलाई मन पर्ने बताए । आर्यनलाई मृदुला खनालले समाचार पढेको मनपर्दो रहे छ । आर्यनले भने- ‘उनमा अपिलिङ झल्कन्छ ।’ कलाकार दिनेश डिसीको रोजाइमा परनि् सदीक्षा श्रेष्ठ । ‘बौद्धिक सुन्दरी’ भन्दै डिसीले सदीक्षाको प्रशंसा गरे । त्यसैगरी सपना मल्ल प्रधान, झरना बज्राचार्य, स्नेहा राणा, जेनिशा मोक्तान आदिलाई उनले ‘व्यक्तित्व र पर्फर्मेन्स’ का आधारमा आकर्षक बताए । गायक राजेश पायल राईको नम्बर वानमा परनि् मनीषा कोइराला । ‘वलिउडमा समेत स्थापित भएकी नेपाली महिला’ भन्दै राईले आफू मनीषाबाट प्रभावित भएको बताए । त्यसैगरी मृदुला खनाल, अञ्जु पन्त, माल्भिका सुब्बा, केकी अधिकारी, ऋचा शर्मालाई उनले आकर्षक दसको सूचीमा राखे । डिजिटेन्टमेन्टका सिइओ सुमन शाक्यले नम्रता श्रेष्ठ, स्नेहा राणा, सदीक्षा श्रेष्ठ, करिश्मा मानन्धर, झरना बज्राचार्य, रुविना जोशी, साहना बज्राचार्य आदिलाई ‘आकर्षक व्यक्तित्व’ बताए ।
‘स्मार्ट, पर्सनालिटी तथा कन्फिडेन्ट’ का आधारमा माल्भिका सुब्बालाई छनौट गरे भिजे तथा गायक सोनम पाखि्रनले । त्यसैगरी उनले सदीक्षा श्रेष्ठलाई ‘ब्युटी विथ ब्रेन’ भन्दै आफ्नो सूचीभित्र सामेल गरे । उनले दिया मास्केलाई ‘जुनसुकै भूमिकामा अभिनय गर्न सक्ने क्षमता भएकी आकर्षक कलाकार’ बताए । साहित्यकार कृष्ण धरावासीले दस आकर्षक महिलाको सूचीमा अधिकांश साहित्यक्षेत्रमा स्थापित महिलाको नाम लिए । बेन्जु शर्मा, सुलोचना मानन्धर, शारदा शर्मा, मञ्जुश्री थापा आदि धरावासीको प्राथमिकतामा परे । त्यसैगरी उनले रामकुमारी झाँक्री, संगीता थापा, चित्रलेखा यादवलाई ‘संघर्षशील, सफल र आकर्षक’ महिलाका रूपमा उल्लेख गरे । ‘राजनैतिक सचे तनाका साथ साहित्य क्षेत्रमा उत्रिएकी’ भन्दै उनले महिला साहित्यकारहरूको नाम लिएका थिए ।
‘आ-आफ्नो क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील र व्यक्तित्वसमेत आकर्षक भएको’ बताउँदै रंगकर्मी अनुप बरालले सपना मल्ल प्रधान, मञ्जुश्री थापा, मनीषा कोइराला, सदीक्षा श्रेष्ठ, करिष्मा कार्की, माल्भिका सुब्बा, उषा खड्की, संगीता थापा आदिको नाम लिए । ‘आनि छोइङ डोल्माले केश पालेको भए अझ सुन्दर देखिने’ बताए हेयर डिजाइनर नील डेभिड कटुवालले । उनले आनीछोइङ निकै आकर्षक भएको उल्लेख गरे । त्यसो त नीलको नम्बर वानमा परनि् नम्रता श्रेष्ठ । ‘नम्रता ब्युटिफुल, स्ट्रोङ र कन्फिडेन्स भएकी महिला हुन्,’ उनले भने । शिक्षाविद् विक्रम राईले करिश्मा मानन्धरलाई सर्वाधिक आकर्षक महिला बताए । उनले अन्यमा रेखा थापा, दिया मास्के, साहना बज्राचायर् , माल्भिका सुब्बा, जेनिशा मोक्तान पनि आफूलाई आकर्षक लाग्ने बताए ।
इन एन्ड आउट
साप्ताहिकले गतवर्ष भ्यालेन्टाइन डेमै उत्कृष्ट १० आकर्षक पुरुष र महिलाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार महिलातर्फ पहिलो स्थानमा सपना मल्ल प्रधान थिइन् । दोस्रोमा झरना बज्राचार्य, तेस्रो स्नेहा राणा, चौथो रामकुमारी झाँक्री, पाँचौं नम्रता श्रेष्ठ, छैटौंमा माल्भिका सुब्बा, सातौं मन्जुश्री थापा, आठौं करिश्मा मानन्धर, नवौं रविना जोशी, दशौंमा रेखा थापा र सिम्रिका शर्मा थिए । यो वर्षको सर्वेक्षणमा गतवर्ष पहिलो स्थानमा रहेकी सपना मल्ल प्रधान दशौं स्थानमा पुगिन भनें गत वर्ष आठौं स्थानमा रहेकी करिश्मा पहिलो स्थान ओगट्न सफल भइन् । यो वर्ष पनि आकर्षक महिलाको सूचीमा आफ्नो स्थान बनाउनेहरूमा झरना बज्राचार्य, माल्विभा सुब्बा तथा नम्रता श्रेष्ठ छन् । यसबाहेक सबै सूचीमा नयाँ अनुहार छन् ।
यस्तै पुरुषतर्फ गत वर्ष राजेश हमाल र गगन थापा पहिलो स्थानमा थिए । सूचीअनुसार दोस्रो स्थानमा भूषण दाहाल, तेस्रो सुबासचन्द नेम्बाङ, चौथो निमा रुम्बा, पाँचौं हरविंश आचार्य, छैटौं सुरजसिंह ठकुरी, सातौं अनिल शाह, आठौं बाबुराम भट्टराई, नवौं विनोद चौधरी तथा दशौं स्थानमा सुगम पोखरेल थिए । यो वर्ष पहिलो स्थानमा रहेका गगन थापा र राजेश हमाललाई क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पार्दै भूषण दाहाल पहिलो स्थान ओगट्न सफल भएका छन् । यो वर्ष सुबासचन्द्र नेम्बाङ, सुरजसिंह ठकुरी, विनोद चौधरी तथा सुगम पोखरेल उत्कृष्ट १० बाट बाहिरिएका छन् ।
महिलामा जो उल्लेख्य रहे
सर्वेक्षणका क्रममा महिलाहरूमा धेरै मत ल्याएर पनि स्नेहा राणाले उत्कृष्ट १० भित्र स्थान बनाउन सकिनन् । गत वर्ष स्नेहा उत्कृष्ट ३ भित्र थिइन् । स्नेहा राणाको शारिरिक सौन्दर्यका ’boutमा धेरै सहभागीले खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । नेपाली समाजमा उनी जस्ती सुन्दर महिला नभएको धेरैको प्रतिक्रिया थियो । फोटोजेनिक स्नेहाको छालाको रंग र सुहाउँदो शारीरकि बनोटले पनि उनीप्रति धेरै मानिस आकषिर्त छन् । ‘उनको सुन्दरताप्रति नलोभिनेहरू कमै भेटिएलान्, सुन्दरता के हो भन्ने कुरा उनमा झल्कन्छ’ एक सहभागीले भनेका थिए । यस्तै मनीषा कोइरालाको आकर्षक व्यक्तित्वको पनि धेरैले प्रशंसा गरे । गायक राजेश पायल राईका अनुसार मनीषाले नेपाली नागरकिसूग विवाह गरेर नेपालीहरूको मनजितेकी छिन् । यस्तै महानायक राजेश हमालले आफ्नै ढंगले जीवन जिउन सक्ने व्यक्तित्वका रूपमा मनिषाको नाम लिएका थिए ।
सर्वेक्षणका क्रममा आनि छोइङ डोल्मालाई पनि धेरैले आकर्षक व्यक्तित्वको सूचीमा राखे । हेयर स्टाइलिष्ट नील डेभिडले आनिको गायकी मात्र होइन, उनको शारीरकि स्वरूप पनि उत्तिकै आकर्षक भएको प्रतिक्रिया दिए । आनी छोइङको राम्रो शरीरमा हेयर स्टाइलको संगम कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, निल डेभिडले भनें, उहाँ वास्तवमै राम्री हुनुहुन्छ । आलोकश्री, विक्रम राई, कृष्ण धरावासी, अभिनव कसजु आदिले आनीको सुन्दरता र मीठो स्वरको प्रशंसा गरेका थिए । यस्तै उषा खड्गीको सौ न्दर्यप्रति मोहित हुनेहरू अझै पनि कम छैनन् । उषा सन् २००० की मिस नेपाल हुन् । उषालाई तीन जना सहभागीले भोट गरेका थिए । उषाको हासो, सुन्दर अनुहार तथा आकर्षक शरीरका कारण सहभागीले भोट दिएको बताएका थिए । सर्वेक्षणका क्रममा गत वर्ष दशौं स्थानमा रहेकी रेखा थापा यो वर्ष उत्कृष्ट १० भित्र पर्न सकिनन् । यद्यपि सहभागीहरूले रेखाको ग्लामर, कुशल अभिनय क्षमता एवं फोटोजेनिक शारीरकि सौन्दर्यको प्रशंसा गरेका थिए । सर्वेक्षणमा नायिका निशा अधिकारी, अम्बिका श्रेष्ठ, रुबि राणा, रविना जोशी, करिश्मा कार्की तथा संगीना वैद्यले पनि सहभागीहरूको उल्लेख्य मत पाएका थिए ।
आकर्षक महिलाको छनौटमा सहभागी पुरुषहरू
.उद्धव पौडेल चलचित्र निर्माता
विक्रम राई शिक्षाविद्/स्तम्भकार
भूषण दाहाल सञ्चारकर्मी
नील डेभिड कटवाल हेयर स्टाइलिष्ट
राजेश हमाल नायक
राजेश पायल राई गायक
आर्यन सिंग्देल नायक
दिनेश डिसी टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता
निमा रुम्बा गायक
अभिनव कसजु फोटोग्राफर/वेब जर्नालिष्ट
सोनम पाखि्रन गायक/भिजे
कृष्ण धरावासी साहित्यकार
अनुप बराल रंगकर्मी/चलचित्रकर्मी
सुमन शाक्य व्यवसायी (डिजिटेनमेन्ट)
आकर्षक पुरुषको छनौटमा सहभागी महिलाहरू
.सपना मल्ल प्रधान सभासद/अधिवक्ता
बबिता बस्नेत पत्रकार
कोमल वलि गायिका/सञ्चारकर्मी
उषा खड्गी पूर्वमिस नेपाल
संगीना वैद्य खेलाडी
नम्रता श्रेष्ठ नायिका
कृति भट्टराई कार्यक्रम प्रस्तोता
शैलजा अधिकारी फेसन डिजाइनर
गायत्री शाह सभासद
मल्लिका कार्की गायिका
आयशा शाक्य खेलाडी
सुवानी मोक्तान गायिका
बेबी थापा मोडल
आस्था बी गायिका
प्रतिमा श्रेष्ठ आरजे
१ भूषण दाहाल
नेपाली सेलिब्रेटीहरूमध्ये सबैभन्दा आकर्षक व्यक्तित्वका रूपमा भूषण दाहाल पहिलो स्थानमा पर्न सफल भएका छन् । म्युजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री, चलचित्र तथा टक-सो सबै विधामा अब्बल भूषण सधैं फिट देखिन्छन् । कद होचो भए पनि व्यक्तित्वका निम्ति भूषण सदैव सचेत देखिन्छन् । टक सो ‘फायर साइड’ का प्रस्तोता दाहालको स्कार्फ पहिरिने शैलीले आफूलाई आकषिर्त गरेको पूर्वमिस नेपाल उषा खड्गीले बताइन् । ‘बोल्ने शैली तथा आकर्षक व्यक्तित्वले पनि दाहाललाई उचाइमा पुर्‍याएको हो’ पूर्व मिस नेपाल खड्गीले बताइन् । यसपटकको सर्वेक्षणमा पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सफल भूषण गत वर्ष दोस्रो स्थानमा थिए । बीए अध्ययनका क्रममा नेपाल टेलिभिजनको जागिरे भएका भूषणले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एमए गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनको सन्डे पप कार्यक्रममार्फत उनी युवापुस्तामाझ लोकपि्रय भएका थिए । ‘भूषण दाहालको सुहाउँदो पहिरन शैलीले सबैलाई आकषिर्त गर्छ’ फेसन डिजाइनिङ इन्स्टिच्युट आइइसीकी प्रमुख कार्यकारी शैलजा अधिकारीले भनिन्- ‘आकर्षक व्यक्तित्वका अतिरिक्त सानो कुरामा पनि गहिराइमा पुगेर पर्याप्त गृहकार्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँको शैली मलाई मनपर्छ ।’ उनले निर्देशन गरेको चलचित्र कागवेनीले प्राविधिक रुपमा नेपाली चलचित्र उद्योग नयाँ ट्रेण्ड दिएको मानिन्छ ।
नेविसंघको केन्द्रीय महामन्त्री भएपछि गगन थापाको लोकपि्रयता चुलिएको थियो । कुशल वक्ताका रूपमा राजनैतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका गगन अहिले नेपाली कांग्रेसका युवा नेताका रूपमा परिचित छन् । गगन नेपाली महिलाहरूमाझ पनि उत्तिकै लोकपि्रय छन् । गत वर्ष पहिलो स्थानमा रहेका गगन यसपटक दोस्रो स्थानमा देखिए पनि उनको व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्नेहरू थुप्रै भेटिए । उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभासद् भएका हुन् । खेलाडी संगीना वैद्यले भनिन्-‘सबल युवा नेतृत्वका रूपमा गगनको उपस्थितिले मलाई आकषिर्त गरेको हो ।’ वि.स.. २०३३ सालमा काठमाडौंको प्रसूति गृहमा जन्मिएका गगनको वाल्यकालको केही समय सिन्धुपाल्चोकमा वितेको थियो । गगन कार्यक्रमहरूमा भिन्न-भिन्न गेटअपमा देखिन्छन् । ‘मलाई उनको पर्सनालिटी मनपर्छ’ सभासद सपना मल्ल प्रधानले भनिन्- ‘काम गर्ने शैली पनि आकर्षक छ ।’ नायिका कृति भट्टराई, खेलाडी आयशा शाक्य, गायिका आस्था बी, मल्लिका कार्की, सुवानी मोक्तान, नायिका नम्रता श्रेष्ठ आदिले गगनको व्यक्तित्वको खुलेर प्रशंसा गरे ।
नेपाली चलचित्र उद्योगका सर्वाधिक चर्चित कलाकारको परिचय बनाएका राजेश हमाल पर्दामा मात्र होइन् पर्दा बाहिर पनि उत्तिकै लोकपि्रय छन् । साप्ताहिकको सर्वेक्षणका क्रममा गत वर्ष पहिलो स्थानमा रहेका नायक हमाल यो वर्ष नम्बर तीनमा पुगे । पाल्पा, तानसेनमा सन् १९६४ जुन ९ तारिखमा जन्मिएका हमालको तर्कसंगत संवाद शैलीले उनलाई बौद्धिक व्यक्तित्व बनाएको हो । २०४६ सालमा चलचित्र युगदेखि युगसम्मबाट चलचित्र करियर प्रारम्भ गरेका राजेशले यो क्षेत्रमा दुई दशक पूरा गरिसके का छन् । नयाँ दिल्लीमा रहँदा उनको आकर्षक शारीरिक बनावट देखेर त्यहाँको लोकपि्रय म्यागेजिन फेसनेटमा आवरण तस्बिर छापिएपछि उनको मोडलिङ यात्रा प्रारम्भ भएको थियो । सन् १९८६ मा नेपालमा पहिलोपटक र्‍याम्पमा उत्रिएका राजेश हमालले अहिलेसम्म २ सय ५० भन्दा बढी चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् । राजेशले चण्डीगढस्थित पंजाब विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर पूरा गरे पछि मोडलिङ र अभिनयमा करियर बनाउने निर्णय गरेका थिए । साप्ताहिकको सर्वेक्षणका क्रममा सभासद सपना मल्ल प्रधान, गायिका मल्लिका कार्की, मोडल बेबी थापा, खेलाडी आयशा शाक्य, गायिका आस्था बी आदिले हमालको व्यक्तित्वको प्रशंसा गरेका थिए । ‘राजेश हमाल जस्तो लोकपि्रय व्यक्ति मैले अहिले सम्म देखेको छैन’ गायिका मल्लिका कार्कीले भनिन्- ‘उहाँको शारीरिक संरचना पनि उत्तिकै आकर्षक छ ।’
४ निमा रुम्बा
निमा रुम्बा नेपाली पप संगीतमा सर्वाधिक आकर्षक गायकका रूपमा चिनिन्छन् । वेष्टर्न शैलीको गेटअप तथा रक पप प्यार्टनका म्युजिकले पनि उनी नेपाली युवा मनको ढुकढुकी बन्न पुगेका हुन् । मिस क्याटवाक गीतबाट जमेका निमा त्यसयता निरन्तर नेपाली संगीतमा क्रियाशील छन् । साप्ताहिकको सर्वेक्षणका क्रममा गतवर्षको चौथो स्थानलाई निमाले यो वर्ष पनि गुम्न दिएनन् । निमाको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेकै उनको पर्फर्मेन्सको छुट्टै शैली हो । ‘जतिबेला निमा स्टेजमा उत्रिएर गीत प्रस्तुत गर्न थाल्छन्, त्यसबेला युवतीहरू भुतुक्कै हुन्छन् ।’ गायिका आस्थाबिले भनिन्- ‘उनीसँग सबैलाई आकषिर्त गर्ने क्षमता छ, व्यक्तित्व पनि त्यतिकै आकर्षक छ ।’ निमाको गीत गाउने शैलीले मेरो मन जितेको छ, नायिका नम्रता श्रेष्ठले बताइन् । निमा आकर्षक नेपाली पुरुषहरूमा आइकन नै हुन्, उनको स्टाइलिस छवि जमेको छ, पूर्व मिसनेपाल उषा खड्गीले भनिन्, ह्याटको ट्रेन्ड निमाले नै चलाएका हुन् ।
५ पारस खड्का
पारस खड्का साप्ताहिकको यो सर्वेक्षणमा यो वर्ष न्यु कमरका रूपमा देखिएका छन् । नेपाली क्रिकेटका कप्तान पारस खेल मैदानमा मात्र होइन्, शारिरिक रूपमा पनि उत्तिकै फिट देखिन्छन् । उनको व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्नेहरू धेरै छन् । सर्वेक्षणमा पाँचौ स्थान हासिल गरेका पारस हेन्डसम भएको महिलाहरूको प्रतिक्रिया थियो । विज्ञापनमा समेत देखिएका पारसले अहिले नेपाली क्रिकेट टिमलाई फेरी अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सफल बनाउने अभिभारा बोकेका छन् । ‘पारस खेलाडीका रूपमा मात्र होइन व्यक्तित्वका दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै आर्कषक छन्’ खेलाडी आयशा शाक्यले भनिन्- ‘पारस हेन्डसम भएकैले उनले विज्ञापन र मोडलिङमा अवसर पाएका छन् ।’ गायिका सुवानी मोक्तान, मल्लिका कार्की, फेसन डिजाइनर शैलजा अधिकारी आदिले पारसको प्रशंसा गरे ।
६ हरिवंश आचार्य
हरिवंश आचार्यको परिचय हास्य अभिनेता मात्र होइन बहुप्रतिभाशाली कलाकारका रूपमा छ । हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई नेपाली कला जगतमा सबैभन्दा सम्मानित व्यक्तित्वका रुपमा लिइन्छ । गत वर्ष नम्बर ५ मा रहेका हरिवंश यो वर्ष नम्बर ६ मा पुगेका छन् । हरिवंश आचार्यको आकर्षक व्यक्तित्व र बहुभूमिकामा स्मरणीय अभिनय गरेको कुरा सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले बताए । चलचित्रको नायक, खलनायक, संवाद लेखन, निर्देशन, गायन सबै विधामा अब्बल हरिवंश विगत तीन दशक देखि निरन्तर कला क्षेत्रमा छन् । फरक चरित्रमा देखिन सक्नु हरिवंशको विशेषता हो । मदनकृष्ण श्रेष्ठसँगको सहकार्य अघि उनले ६ वर्ष एक्लै संघर्ष गरेका थिए । २०३७ साल वैशाख १४ गते पहिलो पटक उनीहरू एउटै मञ्चमा देखिए । ‘मह’ को नामबाट जोडिएको उनीहरूको सहकार्य नेपाली हास्य कलाकारिताका लागि धेरैको आदर्श बनेको छ । ‘उहाँको आकर्षक शारीरिक व्यक्तित्वले अभिनय कलालाई पनि साथ दिएको छ’ गायिका कोमल वलिले भनिन्- ‘त्यसैले सबै प्रकारको गेटअपमा उहाँ आकर्षक देखिनुहुन्छ ।’ खेलाडि संगीना वैद्य, रेडियोकर्मी प्रतिमा श्रेष्ठ, नायिका कृति भट्टराई, पत्रकार बबिता बस्नेत आदिले हरिवंशको नाम आकर्षक पुरुषका रूपमा सिफारिश गरे ।
७ डा. बाबुराम भट्टराई
यो वर्ष बाबुराम भट्टराई एक खुडि्कलो माथि चढेका छन् । यसपटकको सर्वेक्षणमा सातौं स्थानमा आएका डा. भट्टराईको व्यक्तित्वका सम्बन्धमा सहभागीहरूले राम्रो प्रतिक्रिया जनाए । डा. भट्टराई व्यक्तित्व र बौद्धिकताको संगम भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययनका क्रममा कहिल्यै दोस्रो नभएका डा. बाबुराम राजनैतिक जीवनमा भने पहिलो हुन सकेका छैनन् । ०२६ को एसएलसीमा बोर्ड प्रथम भएका डा. भट्टराईले द नेचर अफ अन्डरडेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल विषयमा विद्यावारिधी गरेका थिए । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री रहँदा उनको लोकपि्रयता अझ बढेको थियो । जीवनको छैटौं दशकमा पनि उनको शारीरिक सक्रियता अर्को आकर्षक पक्ष हो । ‘डा. बाबुराम भट्टराईसँग नजिक बसेर काम गर्दा उहाँको व्यक्तित्वले मलाई आकषिर्त गरेको छ । उहाँ देशलाई चाहिएको व्यक्ति हो,’ सभासद सपना मल्ल प्रधानले भनिन्- ‘मलाई उहाँको काम गर्ने शैली पनि राम्रो लाग्छ । खेलाडी संगीना वैद्य, मोडल बेबि थापा, सभासद गायत्री शाह आदिले पनि डा. भट्टराईको पर्सनालिटीको प्रसंशा गरे ।
८ अनिल शाह
आकर्षक व्यक्तित्वका अनिल शाह गत वर्षको सर्वेक्षणमा नम्बर ७ मा थिए भने यो वर्ष नम्बर ८ मा छन् । सर्वाधिक सफल नेपाली बैंकर्सका रूपमा परिचित अनिललाई टल फिगरका कारण सहभागीहरूले हेन्डसमको संज्ञा दिए । तत्कालिन गि्रन्डलेज बैंक अर्थात् हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकबाट करियर विकास गरेका शाहले नबिल बैंकमा महाप्रबन्धकका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकबाट बैंकिङ बुझेका शाहले त्यसपछि निरन्तर माथिल्लो स्थान बनाउँदै गए । विदेशी लगानी रहेको नविल वैंकमा उनी पहिलो नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न सफल भए । नबिल बैंकको सञ्जाल फैलाउन अनिलको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । अनिल हाल मेगा बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सर्वेक्षणका क्रममा फिट एन्ड फाइन ड्रेसमा प्रस्तुत हुने अनिलको हिस्सी परेको अनुहारको प्रशंसा धेरैले गरे । उनको व्यक्तित्वले धेरैलाई प्रभावित तुल्याउँछ, सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतले भनिन्- ‘अनिल उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय नेतृत्वको राम्रो उदाहरण हुन् ।’ अनिल साहसी व्यक्ति भएकाले उनलाई रोजेको खेलाडी संगीना वैद्यले बताइन् । अनिलले दिल्ली युनिभर्सिटीबाट फाइनान्स एन्ड मार्केटिङमा एमबीए तथा वासिङ्टन युनिभर्सिटीबाट इन्टरनेसनल बिजनेस फाइनान्समा बीबीए गरेका छन् ।
८ डा.सञ्जीव उप्रेती
विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, रंगकर्मी, स्तम्भकार, साहित्यकार आदि थुप्रै विधामा आफूलाई खरो रूपमा उभ्याउन सफल सञ्जीव उप्रेतीको काया कुनै विदेशीको जस्तो लाग्छ । उनी अंग्रेजी बोलिरहेका बेला धेरैले उनलाई विदेशी पनि मान्छन् । ‘घनचक्कर’ उपन्यासका यी सर्जकको कर्ली केश पनि धेरैका निम्ति आकर्षक मानिन्छ । अग्लो कदका सञ्जीव सधैं केही न केही खोजिरहेको भानमा भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । ‘मलाई सञ्जीव उप्रेती अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक पुरुष लाग्छन्,’ गायिका कोमल वलीले भनिन्- ‘उनी शारीरिक रूपमा मात्र होइन, लेखनका दृष्टिकोणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्व हुन् ।’ सञ्जीव रंगकर्मीका रूपमा पनि उत्तिकै सफल छन् । थिएटरमा उनको अभिनयको पनि सहभागीहरूले प्रशंसा गरे । उनको नियमित लेख तथा सौम्य व्यक्तित्वको पनि सबैले प्रशंसा गरेका थिए । सञ्जीव साप्ताहिकको यो सर्वेक्षणमा आठौं स्थानमा छन् ।
८ कमल थापा
राजनैतिक रूपमा पाश्र्वमा धकेलिए पनि कमल थापाको शारिरिक व्यक्तित्वका प्रशंसकहरू धेरै छन् । साप्ताहिक सर्वेक्षणका क्रममा नवौं स्थानमा रहेका कमल थापाको व्यक्तित्व र वाकपटुताको धेरैले प्रशंसा गरे । ‘म कमल थापाको शारिरिक तथा बौद्धिक दुवै व्यक्तित्वबाट प्रभावित छु,’ फेसन डिजाइनर शैलजा अधिकारीले भनिन्- ‘उहाँको शारिरिक संरचना नै गजबको छ, फिटनेसमा ध्यान दिनुहुन्छ, यस्तो व्यक्तित्वलाई जस्तो पहिरन पनि सुहाउँछ ।’ गायिका कोमल वलि, मोडल बेबी थापा, नायिका कृति भट्टराई आदिले कमल थापालाई आकर्षक पुरुषको सूचीमा उभ्याएका छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा टेनिस खेलाडी पनि हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा समेत सफल थापा खेलकै कारण फिट देखिएका हुन् ।
९ डा भोला रिजाल
पेसाले स्त्रीरोग विशेषज्ञ भए पनि डा. भोला रिजालका अन्य थुप्रै परिचय छन् । उनी गीतकार, संगीतकार तथा गायकका रूपमा चिनिन्छन् । नेपाली चलचित्रका निर्माता, गीति चलचित्रका कथाकार, समाजसेवी आदि क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । डा. भोला रिजाल भन्नेबित्तिकै केश फुलेको, हिस्सी परेको गोरो चिटिक्क अनुहार अगाडि आउँछ । हजारौं रोगीको सेवा गरेका रिजाललाई महिलाहरूले निकै माया गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा सर्वेक्षणमा देखियो । ‘उहाँको ह्वाइट हेयरले धेरैलाई आकषिर्त गर्छ,’ पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले भनिन्- ‘अहिलेसम्म पनि सक्रिय उहाँको व्यवहार र व्यक्तित्वले मलाई सधैं आकषिर्त गरेको छ ।’ सभासद् गायत्री शाह, मोडल बेबी थापा, नायिका कृति भट्टराई आदिले भोला रिजालको बहुआयामिक व्यक्तित्वको प्रशंसा गरे । उमेरले ६ दशक नाघे पनि डा. रिजाल अझै पनि योङ देखिने कृति भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो ।
१० प्रशान्त ताम्राकार
प्रशान्त ताम्राकार पहिलो पुस्ताको मोडलका रूपमा चिनिन्छन् । अहिले पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मोडल को छ ? भनेर खोजियो भने सबैले प्रशान्त ताम्राकारकै नाम लिन्छन् । साप्ताहिकको सर्वेक्षणका क्रममा पनि आकर्षक नेपाली मोडलको नाम लिने क्रममा प्रशान्त ताम्राकारको नाम धेरैले लिए । अग्ला प्रशान्त झट्ट हेर्दा नै वास्तविक ‘हिरो’ लाग्छन् । मोडलपछि कोरियोग्राफर र इभेन्ट म्यानेजरका रूपमा परिचय बनाएका प्रशान्त १६ वर्ष लामो मोडलिङ करियरपछि एउटा चलचित्रमा नायकका रूपमा देखा पर्दैछन् । चलचित्र गुडबाईमा अभिनय गरेका प्रशान्त नेपाली चलचित्र निर्माणमा नयाँ शैली आएकाले नायक बन्न तयार भएको बताउँछन् । ‘प्रशान्त टप मो डल हुन्, उनी आकर्षक पुरुषको सूचीमा आउनुपर्छ ।’ पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले भनिन्- ‘मोडल भन्न लायक उहाँ नै हो ।’ फेसन डिजाइनर शैलजा अधिकारीले पनि उषा खड्गीको भनाइलाई साथ दिँदै भनिन्- ‘प्रशान्त आकर्षक नेपाली पुरुषको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्छन् ।’ नायिका नम्रता श्रेष्ठले पनि उनलाई मत दिएकी थिइन् । यो वर्ष उनी पहिलो पटक नम्बर दसमा अटाएका हुन् ।
Posted By :Dambar Prasad Rimal Source:saptahik khabar patrika
This entry was posted in थाहा पाईराखे राम्रो, बिचार/बिमर्श, मनोरन्जन. Bookmark the permalink.